Windows DVD Onye kere MOV: Olee Ọkụ MOV Na Windows DVD Onye kere
Chọrọ iji Windows DVD Onye kere na-eme ka DVD si gị MOV video faịlụ, sịnụ, video footages si gị igwefoto dijitalụ ma ọ bụ QuickTime MOV fim? Ọ bụrụ na ị gbalịrị ime nke a, ị ga-enweta ihe njehie ozi sị "The faịlụ bụghị a na-akwado ụdị." Yeah, Windows DVD Onye kere agaghịkwa na-akwado MOV usoro. Ọfọn, ihe i kwesịrị ime ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọkụ MOV ka DVD na Windows DVD Onye kere? Ojiji nke a pụrụ ịdabere na 3rd ọzọ omume ike ga-edozi.
N'ihi nke a, Wondershare Video Ntụgharị na-ike na-atụ aro. Ọ bụ ike nke converting fọrọ nke nta ọ bụla video format ọ bụla na-ewu ewu video & audio format, ngwaọrụ, ngwa na Zero àgwà ọnwụ. Ị nwere ike iji ya ọsọ ọsọ na mfe tọghata gị MOV faịlụ ka Windows DVD Onye kere akwado formats dị ka WMV, MPEG2 wdg
Ọzọ dị mkpa mere m ike ikwu na a Windows DVD Onye kere MOV Ntụgharị ọ bụ ike ka ị na ozugbo ọkụ DVD ọ bụla na MOV faịlụ na ala. Ọ bụrụ na ị nwere ike ime na-enweghị Windows DVD Onye kere, a usoro bụ ihe kasị mma ọzọ ga-eme nhọrọ DVD si gị MOV faịlụ. Ọtụtụ free na jụụ DVD menu ndebiri na-nyere, nakwa dị ka niile nkịtị editting ngwá ọrụ dị ka cropping, ọnwụ, trimming, isonyere, n'usoro n'usoro, na-agbakwunye ndabere music, foto, watermark wdg na-ẹdude. Dị nnọọ hazie ma ọ bụ ọkụ gị DVD na nkeji.
Isiokwu a na-agụnye abụọ akụkụ karị-egosi gị otú tọghata MOV maka Windows DVD Onye kere na otú kpọmkwem ọkụ DVD si MOV nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Nkebi nke 1: Olee otú iji tọghata MOV ka Windows DVD Onye kere
Part 2: Olee otú kpọmkwem ọkụ MOV ka DVD site na iji ngwa
Ị nwere iji tọghata MOV enyi na enyi usoro maka Windows DVD Onye kere tupu ị mbubata ha na ngwa. Na i nwere ike ịmụta otú e si eme ya mfe site na isoro ntuziaka n'okpuru nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1: Import MOV a Windows DVD Onye kere Ntụgharị
Akpa, ị chọrọ mbubata MOV faịlụ i chọrọ nke a video Ntụgharị. Ime ya, i nwere ike ma pịa "Tinye Files" button ke "tọghata" interface ma ọ bụ ozugbo ịdọrọ lekwasịrị MOV faịlụ ka ngwa a.
Nzọụkwụ 2: Họrọ WMV ma ọ bụ MPEG 2 ka mmepụta format
WMV ma ọ bụ MPEG 2 bụ nri video format na Windows DVD Onye kere ike ịmata. Ya mere, ị nwere ike họrọ otu n'ime mmadụ abụọ formats ebe a. Ime ya, na mbụ, na-emeghe ya dropdown mmepụta format ndepụta na "mmepụta Format" ebi ndụ, na mgbe ahụ na-esonụ mmepụta format window, ị nwere ike họrọ "WMV" ma ọ bụ "MPEG 2" si "usoro"> "Video" Atiya .
Nzọụkwụ 3: tọghata MOV ka Windows DVD Onye kere
Na ala-nri n'akụkụ nke a Windows DVD Onye kere MOV Ntụgharị ugbu a interface, i kwesịrị pịa "tọghata" button na-amalite video akakabarede. Mgbe akakabarede na-okokụre a nkeji ole na ole mgbe e mesịrị, ị nwere ike mbubata mmepụta faịlụ site na mmepụta nchekwa Windows DVD Onye kere maka buring MOV na Windows DVD kere ya.
Part 2: Olee otú kpọmkwem ọkụ DVD si MOV site na iji ngwa
Ị ga-ahụ nke a ngwa bụ mma omume na-eme ka DVD si gị MOV faịlụ.
Nzọụkwụ 1: Import MOV faịlụ ka a na ngwa
Mbubata gị MOV faịlụ ka a na ngwa ke otu ụzọ n'elu. Ma biko mara na ị chọrọ ịbanye "Ọkụ" interface, ọ bụghị "tọghata" interface tupu eme nke a.
Hazie a DVD menu n'ihi na gị DVD, dị nnọọ see ịgbanwe Template n'akụkụ aka nri na-ahọrọ otu free DVD menu template wee tinye ụfọdụ nke ọkacha mmasị gị ọcha dị ka ndabere music, foto, ederede wdg
Ọ bụrụ na ị mkpa retouch gị videos n'ihu gị ọkụ ha n'ime a DVD diski, dị nnọọ pịa Dezie bọtịnụ na video faịlụ mmanya na-emeghe editting window, ebe i nwere ike akuku, bugharia, bee videos, ịgbanwe mmetụta ụfọdụ na ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 3: Malite DVD ọkụ
Fanye a ide DVD5 ma ọ bụ DVD9 diski, setịpụrụ akụkụ kenyere na họrọ a TV standardand bụrụ na mkpa. N'ikpeazụ, pịa Ọkụ na ala-nri akuku nke interface ka a na ngwa-eme ndị ọzọ ọrụ. Mgbe ahụ, dị nnọọ na-eche free na-enweta dere DVD diski na gị DVD ọkpụkpọ.
> Resource> DVD> Windows DVD Onye kere Ga-Ọkụ MOV? Ngwọta